तपाईँको मोबाइल फोनमा पानी पस्यो वा पानीले भिज्यो ? फोन बचाउन अपनाउनुस् यी उपायहरु - Technology Khabar
» तपाईँको मोबाइल फोनमा पानी पस्यो वा पानीले भिज्यो ? फोन बचाउन अपनाउनुस् यी उपायहरु
काठमाडौं । यो वर्षको मनसुन शुरु भएको निकै दिन भएपनि वर्षाको अनुभुति हुने दिनहरु शुरु भईसकेको छ । मानिसहरु वर्षासँगै गर्मीबाट मुक्त भईयो भनेर आनन्द मानिरहेका छन् । तर यसबिचमा केहि यस्ता मानिसहरु पनि छन जसलाई वर्षाबाट आफ्नो प्रिय डिभाइसको कसरी सुरक्षा गर्ने भनेर चिन्ता हुन्छ ।
वर्षाको बेलामा मानिसहरु पानीमा भिज्ने गर्दछन् र आफ्नो मोबाइल फोन पनि भिजाउँछन् । यसबाहेक कयौं पटक मोबाइल फोन पानीमा झरेर बिग्रने संभावना पनि अधिक हुन्छ । त्यसैले हामी यहाँ पानीमा फोन भिजेमा के गर्ने भन्ने केहि उपायहरु दिने प्रयास गर्दैछौं ।
-यदि तपाईँको मोबाइल फोन पानीमा भिजेमा र त्यस बेला चार्जिंगमा छ भने त्यसलाई तत्काल चार्जिंगबाट हटाउनुहोस् । यदि तपाईँले भिजेको मोबाइल फोनलाई चार्जिंगमा राख्नुभयो भने इलेक्ट्रिक सक लाग्ने खतरा अधिक रहन्छ ।
-फोन वर्षामा भिजेमा वा पानीमा झरेमा सबैभन्दा पहिलो सो फोनलाई स्वीच अफ गर्नुपर्दछ । यदि तपाईँलाई सो फोनले काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्दछ भने पनि त्यसलाई अफ गर्नुहोस् । फोनलाई तुरुन्त स्वीच अफ गर्दा शर्ट शर्किटको खतराबाट बच्न सकिन्छ ।
-फोन भिजेको छ भने सबैभन्दा पहिलो त्यसको ब्याट्री झिक्नुस र फोनलाई कुनै पेपर टावेल वा नरम कपडाले पुछ्नुस् ।
-फोनलाई छिटोभन्दा छिटो सुकाउन चामल सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । यदि तपाईँको फोन पनि पानीमा भिजेको छ भने त्यसलाई चामलको भाँडोमा राख्नुस किनकी चामलले निकै छिटो मोइस्चरलाई सोस्छ ।
-यसबाहेक भिजेको फोनलाई सुकाउनका लागि भ्याकुम क्लिनरको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । फोनको जतिपनि प्वालहरु छन त्यसमा भ्याकुम क्लिनर प्रयोग गर्दा आद्रता छिटै हराउँछ ।
-त्यस्तै भीजेको फोनलाई सुख्खा बनाउने उपयुक्त तरिका भनेको घाममा सुकाउनु पनि हो । केहि घण्टासम्म फोनको ब्याट्री झिकेर त्यसलाई घाममा सुकाउँदा फोन एक पटक पुन स्टार्ट हुनसक्छ ।
यी उपायहरु लगाउँदा पनि तपाईँको मोबाइल फोनमा अझै समस्या देखिएमा नजिकको सर्भिस सेन्टरमा देखाउनुहोस् ।